Avereno jerena sy naoty Iacobus nataon'i Matilde Asensi - Ikkaro
firosoana >> boky >> Iacobus nataon'i Matilde Asensi
Tsy ho hitako izao Mateldi asensi na ny tantarany. Iacobus no fahatelo na fahefatra novakiako, tsy tadidiko tsara, ary toy ny mahazatra dia tantara noforonina tsara. Mailaka, haingana ary mahaliana.
Iacobus dia mety rehefa maniry hamaky hazavana, tantara ary fitsangatsanganana ianao. Ho tianao izany raha tianao ny zavatra mifandraika amin'ny Templars sy ny Templar Order.
Ny hetsika dia nitranga tamin'ny taonjato XIII - XIV, taorian'ny fandravana ny filaharan'ny tempoly. Ny moanina ao amin'ny filaminan'ny miaramila ao amin'ny Hopitaly de San Juan, fantatra amin'ny fahaiza-manaony na mpitsongo dia nalefan'ny Papa John XXII hanadihady ny fahafatesan'ny Papa Clément V sy ny Mpanjaka Philip IV taorian'ny fanozonana nataon'ny Grand Master of the Order . amin'ny Tempoly hovonoina eo amin'ny tsato-kazo.
Momba izany Galcerán de Born, Il Persiquitore ary hiteraka fitsangatsanganana an-tsehatra amin'ny tranga samihafa toa an'i Paris, Avignon ary Camino de Santiago mankany Finisterre izany. Ny fampifangaroana, ny tafika, ny templar, ny hopitaly ary ny baiko jiosy manodidina ny tantaram-piainan'ireo mpilalao fototra.
Fitsangatsanganana haingam-pandeha ity toerana misy toerana ara-tantara lehibe ity izay ampiarahina amin'ny hetsika sy zava-mahaliana.
Tena nankafiziko ny famaritana sy ny fametrahana ny ampahefatry ny jiosy, satria ao an-tanànako dia manana ny ampahan-tany jiosy manan-danja izahay mandra-pandroakan'ny mpanjaka katolika ary izany dia faritra iray manana hatsarana lehibe ankehitriny. Ny fandehanana mamaky ny telovan'ny jiosy ankehitriny dia sary an-tsaina ny tantara tamin'ny lasa.
Lohahevitra mahaliana hotadidina sy hokarohina
Fandravana Montium any Las Médulas
Fotoana kely rehefa mamaritra Las Medulas, ny lehibe indrindra Ny fanjakan'ny romana dia mitrandraka volamena. Any El Bierzo any León no misy azy.
Manazava ny Montium Ruin na Short Mining dia rafitra fitrandrahana ampiasain'ny Romanina hahazoana volamena. Izy io dia misy ny fandravana ny tendrombohitra.
Nanaitra ny fitadidiako ny fiantsoana an'i Pliny. Ao amin'ny zafikeliny Tantara voajanahary, ny olon-kendry romana dia niresaka ny fanararaotana fitrandrahana goavambe nataon'ny Emperora Aogositra tao Hispania Citerior tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana iainantsika. Toerana iray manokana tao amin'io Hispania romana io no mendrika ny sain'ny manam-pahaizana rehetra: Las Médulas, avy tao izay nahazoan'ny Romanina volamena madio roa alina kilao isan-taona. Ny rafitra nampiasaina hisintonana ny vy tamin'ny tany dia ilay antsoina hoe robina rosiana, izay misy ny famoahana rano be tampoka avy amin'ireo fitahirizan-drano goavambe hita eo amin'ny toerana avo indrindra amin'ny Tendrombohitra Aquilanos. Ilay rano navotsotra dia nidina tamim-pahatezerana tamin'ny alàlan'ny lakandrano fito ary, tonga tany Las Médulas, tafahitsoka tamina tambajotran-galeriana nolavain'ny andevo taloha, dia niteraka fihotsahan'ny tany lehibe ary nanindrona ny tany. Nentina tany amin'ny agogas, na farihy goavambe, ireo razana volamena, izay nanangonana sy nodiovina ireo metaly volamena. Ity hetsika rehetra ity dia nandeha tsy nisy fahatapahana nandritra ny roanjato taona.
Momba ny baiko miaramila
Ny mahatonga ahy hieritreritra ary ny lohahevitra sasany tadiaviko fanazavana misimisy kokoa dia ny momba ireo baiko samihafa nolazainao
Didin'ny hopitalin'i Saint John any Jerosalema
Toy ny mitranga rehefa mamaky ianao Ny kaody Da VinciIreo tandika rehetra mamela ny fahazoana vaovao avy amin'ny tontolo iainana dia toa nahaliana ahy tokoa. Akorandriaka, ranjam-gisa, tranobe misy oktagonaly, sns.
Templars sy Valencia, Sagunto, Camp de Morvedre
Tiako ny mitondra ny fahalalana samihafa izay azoko amin'ny tontolo iainana manodidina ahy.
Amin'izany fomba izany sy aorian'ny nahitany ohatra ny fomba tsy maintsy amantaran'izy ireo ny tranon'ny Templar amin'ny endriny octagonal dia manontany tena aho.
Misy trano Templar ve ipetrahako?
Misy fanadihadiana momba izany ve
2.1 Fandravana Montium any Las Médulas
2.2 Momba ny baiko miaramila
2.4 Templars sy Valencia, Sagunto, Camp de Morvedre